‘वामदेव निर्णय माइन्यूट’ पछि बालुवाटारमा बबन्डर ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद छताछुल्ल भएको छ। बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो।
‘सचिवालय बैठकले पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्य केही समयपछि रिक्त हुँदैछ। उक्त पदमा सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ’, बैठकपछि पत्रकारसँग प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
सँगै बुधबारको सचिवालयले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लानुअघि संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि बनाएको कार्यदल भंग गर्ने निर्णयसमेत गर्यो। यी दुबै निर्णय प्रवक्ता श्रेष्ठले पत्रकारलाई जानकारी गराए।
बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पहिलो एजेन्डा नै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने अघि सारे। ओलीले अघि सारेको एजेन्डामाथि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समर्थन जनाए।
संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने सचिवालयको समझदारी सार्वजनिक हुँदा गलत प्रभाव परेको भन्दै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लानुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिए।
उनले बाहिर सार्वजनिक नगर्ने भनिएको कार्यदलको प्रभाव नराम्रो भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए। संविधान संशोधन कार्यदलको चौतर्फी आलोचना भएपछि बुधबारको नेकपा सचिवालयले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गर्‍यो।
माधव नेपाल नेतृत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहने गरी बनेको कार्यदल बनाउने निर्णय गोप्य राख्न नसक्दा निर्णय नै फिर्ता लिनु परेकोप्रति प्रचण्डले बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए ।
कार्यदलको आलोचना भएपछि बैठकमा संयोजक माधव नेपालले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने तर संविधान संशोधनको शर्त बनाउनु नहुने धारणा राखे।
सचिवालय सदस्यले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने विषयमा सहमति जनाए तर त्यसका लागि संविधान संशोधन हुन नसक्ने भनाइ उनीहरुको थियो । गौतमले राष्ट्रियसभामा जान संविधान संशोधनलाई तत्कालका लागि शर्त नबनाउने तर संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान भने दोहोर्‍याएको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए।
संविधान संशोधन कार्यदल भंग गर्ने निर्णय हुँदै गर्दा वामदेवले आफ्नो विषयमा छलफल चल्दा विवाद हुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘हरेक पटक मेरो विषय प्रवेश भएपछि पार्टीमा विवाद हुन्छ’, गौतमले भने, ‘मेरोविरुद्ध खेल किन ? कि खेल बन्द गर्नुहोस्, नत्र कारबाही गर्नुहोस्।’
वामदेवको आक्रोश सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको अन्तिममा बोल्दै उल्टै आफूविरुद्ध पार्टीमा खेल भएको आरोप लगाए। उनले जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न आफू तयार भएको बताए। उनको यो भनाइ यसअघि वामदेवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नु र अहिले उक्त शर्त छोडर राष्ट्रियसभामा जान तयार हुनुतर्फ लक्षित थियो।
पार्टी सचिवालयमा प्रचण्ड बलियो बन्दै गर्दा ओली अल्पमतमा परेको आक्रोशसमेत बुधबार बैठकमा देखियो। सचिवालय बैठक अघि दुई दिनदेखि चलेका छलफल र वामदेवले संविधान संशोधनको शर्त छोड्नुका पछाडि आफूविरुद्धको षड्यन्त्रको रुपमा ओलीले लिएको देखिन्छ।
ओली वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लगे पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने सदस्यको संख्या बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ। गृहकार्य गर्न बनेको कार्यदल भंग भएपछि त्यो असम्भव देखिएको छ। यसले नेकपा नेतृत्वको विवाद छताछुल्ल भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट